တင်ဒါအသိပေးချက် - သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းကိုရရှိမည် - RayHaber
« ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Ulukışla-Yenice ဘူတာအမှတ် 1 အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်း၏အားကောင်းလာအကြားတွေ့
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Zonguldak မြစ်လိုင်းမိုင်အကွာအဝေး: အလုပ်ခြင်းအတွက် 166 900 + ရထားလမ်းဉမင်လိုဏ်ခေါင်းတံတား »
6 ခရိုင်ရုံးအဆောက်အဦးနှင့် outbuildings သန့်ရှင်းလက်ထောက်ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး 4734 အမှတ်အဆိုပါအများပိုင်ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအဆိုပြုချက်ကိုသာအီလက်ထရောနစ် ECAP ထဲကဖြစ်လိမ့်မည်, 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်:
က) အမည်:6ခရိုင်ရုံးအဆောက်အဦးနှင့် outbuildings ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအရာရှိချုပ်ပျော်စေ
86ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ခရိုင်ရုံးအဆောက်အဦးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအရာရှိချုပ်ပျော်စေ outbuildings
ဂ) လုပ်ရမည် / Place အပ် Adana ပြည်နယ်ရှိ - Seyhan ခရိုင် - TCDD Adana6။ ခရိုင်ရုံးအဆောက်အဦးနှင့် outbuildings ။
က) ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး (နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှု) ရက်စွဲနှင့်အချိန်: 15.10.2019 - 10: 00
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုယူရပါမည် (အချင်းချင်းAyrılıkçeşmeKazlıçeşme) 12 / 07 / 2013 TC-ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှု STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်။ စီမံခန့်ခွဲရေးခွဲခြာဇုန်ပစ္စည်းမှအစမ်းရေတွင်း၌-Kazlıçeşme-ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူအများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 86189 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာအဆောက်အအုံကော်မရှင်ဗျူရို34 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ xnumx.kat) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 34716 - 2163378214 ဂ) e-mail လိပ်စာ : ငါနုစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်လိပ်စာတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဃ) komisyonsefligi@hotmail.co: နုက) သဘာဝတရား, အမျိုးအစား https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2163378214-service ကိုဘာသာရပ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သန့်ရှင်းရေးများနှင့်ပိုးသတ်ဆေးန်ဆောင်မှုများလက်ခံရရှိလိမ့်မည် 08 / 10 / 2013 ပျော်စေနှင့်ပိုးသတ်ဆေးန်ဆောင်မှုများ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)5၏လိမ့်မယ်သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဒေသန္တရရုံးရထား၏ Cruise နဲ့ dossier သန့်ရှင်းရေးနှင့်အတူ 13 စုစုပေါင်းဘူတာအဆောက်အအုံနှင့် outbuildings ဖြန့်ဖြူးခြင်း, လွှာမှ၏ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေအမှတ် 4734 ၏ဆေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုများအပိုဒ် 19 အညီပွင့်လင်းတင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 137644 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: INÖNÜ MAHALLESI STATION ကို CADDESI 1 44080 MALATYA Merkez / Malatya ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 4222124800 - 4222124816 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumxbolgemalz ဂိမ်း @ tcdd.gov.t သုံး) နူးညံ့သောစာရွက်စာတမ်းအင်တာနက်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှု (တင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်အလုပ်နေရာများ Cer ညွှန်ကြားမှုနှင့်ရေးရာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသန့်ရှင်းရေးသန့်ရှင်းရေးစက်ခေါင်းနှင့်အထွေထွေချ) ဖွစျလိမျ့မညျပျော်စေ 25 / 12 / 2013 ဝန်ဆောင်မှုပျော်စေ STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒေသန္တရပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်လက်ခံရရှိ၏ရေးရာရြစက်ခေါင်းနှင့် Generator ကိုအတူပါလိမ့်မယ် .CER ညွှန်ကြားမှုခညျြနှောငျအလုပ်ခွင်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသန့်ရှင်းရေးပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေရေတွက်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး 4734 19 အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 190525 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Kurtulus ခရိုင် Ataturk ရိပ်သာလမ်း 01120 Seyhan SEYHAN / ADANA ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3224536914 - 3224575807 ဂ) e-mail လိပ်စာ: အ @ TCDD xnumxbolgemudurlug .gov.tr ​​ဃ) ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပျော်စေနှင့်ပိုးသန့်ဆေးန်ဆောင်မှုများ (တူရကီမီးရထားစက်ရုံမှ) ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် 26 / 12 / 2013 ပျော်စေနှင့်ပိုးသန့်ဆေးဝန်ဆောင်မှုကိုလက်ခံရရှိသမ္မတနိုင်ငံ STATE ရထားလမ်း Administration အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးတူရကီရထားလမ်းစက်ရုံရုံး TCDD တူရကီမီးရထားစက်ရုံအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုငှားရမ်းအပင်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်၏ 8 လအတွင်းနှင့်အတူ 10 အလုပ်သမားများ, သန့်ရှင်းရေးနှင့် fumigation န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအဆောက်အဦးမှပိုင်ဆိုင်ပါလိမ့်မယ် 4734 အမှတ် 19 ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များ ဒါဟာအေးဂျင့်အားဖြင့်ပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 191423 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: အစ္စတန်ဘူလ်လမ်း 8.KM (TMO နော) 06105 BehiçbeyYENİMAHALLE / တူရကီခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111128 - 3122110696 ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပျော်စေနှင့်အပူ Service ကိုလောင်ကျွမ်းခံရမှာ 31 / 12 / 2013 ပျော်စေနှင့်အပူဝန်ဆောင်မှု STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) 1 သမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာထွန်းခြင်းရှိလိမ့်မည်။ ဌာနချုပ်နှင့်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေဗဟိုအဆောက်အဦအပူyakımıဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူရေး 4734 အမှတ် 19 အပိုဒ်နှင့်အတူအမှုတော်တို့ကိုသန့်ရှင်းရေးကျန်းမာရေးMüdnနေဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါများကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည်alınacaktır.haydarpaşဒေသန္တရပစ္စည်းများစီမံခန့်ခွဲရေးသန့်ရှင်းရေးနှင့်အပူမီးရှို့ဖျက်ဆီးဝန်ဆောင်မှု။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်: တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2013 / 189133 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: ဘူတာအဆောက်အအုံကော်မရှင်ဗျူရို34 Haydarpaşa / အစ္စတန်ဘူလ်ခ xnumx.kat) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 34716 - 2163378214 ဂ) e-mail လိပ်စာ : ...
TCDD6။ ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု, ဝန်ဆောင်မှုAlınacaktırပျော်စေ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းသန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုယူရပါမည် (အချင်းချင်းAyrılıkçeşmeKazlıçeşme)
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: န်ဆောင်မှု (တင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်အလုပ်နေရာများ Cer ညွှန်ကြားမှုနှင့်ရေးရာနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးသန့်ရှင်းရေးသန့်ရှင်းရေးစက်ခေါင်းနှင့်အထွေထွေချ) ဖွစျလိမျ့မညျပျော်စေ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပျော်စေနှင့်ပိုးသန့်ဆေးန်ဆောင်မှုများ (တူရကီမီးရထားစက်ရုံမှ) ခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပျော်စေနှင့်အပူ Service ကိုလောင်ကျွမ်းခံရမှာ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Wagon ဗင်နှင့်စက်တွေဝန်ဆောင်မှုသန့်ရှင်းရေးပါလိမ့်မည်